Ahoana no fomba hivavahana mahomby amin'ny fahagagana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Ahoana no fomba hivavahana mahomby amin'ny fahagagana
Misy fotoana izay ilaintsika rehetra eo amin'ny fiainantsika dia tsy misy firy a fahagagana. Andriamanitra tsy mpanao majia, nefa tsy midika izany fa tsy miasa zava-mahatalanjona Andriamanitra. Misy fotoana eo amin'ny fiainantsika izay miseho ny zavatra ary ho fantatsika fa Andriamanitra ihany io.
Ny vavaka dia fomba iray hifandraisana amin'Andriamanitra, fomba iray hahazoana fiverenana amin'Andriamanitra. Vavaka tsara fa ny fahagagana dia mitaky ezaka fanampiny amin'ny mpino. Rehefa reraka ny toe-java-misy ary lasa ny fanantenana rehetra, dia ny hany zavatra andrasantsika dia ilay Fahagagana. Hanao fahagagana foana Andriamanitra na dia amin'ny minitra farany aza dia toa very avokoa ny fanantenana rehetra. Ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona dia ny hangatahinay ary Izy no hamaly antsika.
Ny fahagagana dia mety hidika fanehoana tonga lafatra hanehoana ny fitiavan'ny Andriamanitra anao. Izany no antony tsy hitrangan'izy ireo amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny olon-drehetra. Betsaka ny olona maty noho ny hetsika iray fa tafavoaka ny hafa. Hetsika izay tsy takatry ny mpitsabo tsara indrindra eran-tany, fanasitranana tonga lafatra izay hahatonga azy ireo ho tototry be.
Mihoatra lavitra ny fahalalan'olombelona ny fahagagana ataon'Andriamanitra. Manimba ny protokoloky ny olombelona. Ny fanontaniana apetraky ny olona fotsiny dia ny fomba nahatongavany? fa tsy hisy afaka hanome fanazavana mivaingana momba izay sy ny fomba nitrangan'izany.
Na izany aza, eo amin'ny sehatry ny fanahy, misy fitsipika sy torolàlana amin'ny fanaovana zavatra. Ilaina ny mino ny manaraka ny fitsipika sasany rehefa mivavaka fahagagana.
Mivavaha amin'ny finoana
Ny bokin'ny Hebreo 11: 6 dia nanazava fa raha tsy misy finoana dia tsy azo atao ny mampifaly, na iza na iza izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy ary Mpamaly soa an'ireo izay mikatsaka Azy fatratra. Alohan'ny misy olona mangataka zavatra avy amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy mino aloha izy fa misy Andriamanitra.
Toa tsy afaka ny hangataka zavatra avy amin'ny olona tsy mino azy. Ny vavaka izay natolotra an'Andriamanitra na zavatra izay tsy mino dia tsy hovaliana. Ny zavatra voalohany tokony hataon'ny olona amin'ny fomba mivavaka tsara mba hahitany fahagagana dia ny mino fa misy Andriamanitra. finoana dia avy amin'ny fandrenesana, koa, matetika no mampatanjaka ny finoantsika rehefa tsy manam-pahafahana isika. Rehefa mafy dia mafy ny fiainana ka mianjera isika, tsy fotoana hitomaniana na halahelo, izany no fotoana tsara indrindra hiresahana amin'Andriamanitra.
Ny soratra masina koa dia milaza fa Andriamanitra dia mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Midika izany fa tokony ho mpivavaka mivavaka tsy tapaka ny olona iray. Mivavaka isika raha toa ka Andriamanitra mihitsy no mahalala ny feontsika rehefa mitomany isika, izany no herin'ny fahazotoana. Fitaovana azo antoka hiteraka fahagagana ny finoana. Mety tsy nanan-janaka i Abrahama na dia teo aza ny fampanantenan'Andriamanitra, ny finoana an'i Abrahama no nahatonga ny fiavian'i Isaka.
Mivavaha amin'ireo zavatra izay azon'Andriamanitra atao fotsiny
Andriamanitra irery no mahavita zavatra tsy vita. Indraindray isika mivavaka amin'Andriamanitra mba hanampy antsika hamaha ireo toe-javatra izay nomeny antsika ny fahasoavana sy ny fahaizana ataontsika samirery. Malahelo azy isika amin'ny fotoana ivavahantsika mivavaka ho an'ny zavatra nomen'Andriamanitra fahaizantsika irery, dia hipetraka fotsiny Andriamanitra hijery antsika. Mandritra ireo fotoana ireo no heverintsika fa tsy mihaino vavaka intsony Andriamanitra. Mandritra ireo vanim-potoana ireo dia mety hisalasala ny amin'ny fisian'Andriamanitra mihitsy aza isika.
Tsy maintsy takatsika hoe rahoviana isika no mivavaka mba hahazoana fahagagana. Mpianatra iray izay tsy namaky na inona na inona nivavaka mafy tamin'Andriamanitra fa tokony ho fantany ny valin'ny fanontaniana amin'ny fanadinana izay hosoratany kelikely, ity dia ohatra iray fotsiny amin'ny isan'ny kristiana maro mivavaka diso. Mampipoitra ny fanahin 'Andriamanitra amin'ny lalan-diso izy ireo, ary na dia Andriamanitra aza hangina. Ny soratra masina dia milaza ao amin'ny bokin'ny Ohabolana 5:23 fa maty noho ny tsy fahaizana amam-pifehezana izy, ary noho ny hadalany lehibe, dia nivily lalana izy.
Izany dia manazava ny antony mahatonga ny olona maro hieritreritra fa tsy misy Andriamanitra ary tafalatsaka anaty lavaka tsy hita noanoa ho an'ny tsy voavonjy fotsiny satria tsy manam-pahendrena. Ilay boky ao amin'ny Ohabolana ihany dia milaza fa mahasoa ny mitarika ny fahendrena. Isika mpino dia tsy maintsy mahatakatra ny fotoana tokony hivavahantsika amin'Andriamanitra hahazoana fahagagana.
Ao amin'ny bokin'ny Ezekiela 37: 3, Andriamanitra dia nanontany an'i Ezekiela mpaminany fa raha hiakatra indray ireo taolana maina dia namaly i Ezekiela fa Andriamanitra irery no mahalala. Izy no Andriamanitry ny fahafaha-manao, tsy misy zavatra tsy hainy atao. Ao an-tsaintsika dia fantatsika ny toe-javatra izay Andriamanitra irery ihany no mahavaha azy. Ohatra, ny olona iray izay voamarina fa maty tamina mpitsabo tranainy iray, raha toa ka tsy nahomby intsony ny ezaka ara-pitsaboana rehetra ary very fanantenana ireo mpitsabo tamin'ny famelomana indray ny olona toy izany dia afaka manao ny fahagagana Andriamanitra Izy irery no mahatonga taolana maina hahazo fiainana indray.
Mivavaha amin'ny Tenin'Andriamanitra
Milaza ny soratra Masina fa jiro ho an'ny tongotro ny teninao, jironay ny anjarako. Ny fitaoman'Andriamanitra dia fitaovam-piadiana mahery vaika, mahatonga antsika hahatakatra fa manome voninahitra ny teniny mihoatra noho ny anarany Andriamanitra.
Na dia handalo aza ny lanitra sy ny tany, tsy hisy hilazako ny teniko raha tsy efa nahatanteraka ny antony nandefasana azy. Isaky ny te hivavaka isika dia tsy maintsy mianatra mampiasa ny tenin Andriamanitra amin'ny vavaka.
Na i Kristy aza mandalina ny soratra masina ary io fotoana io dia naka fanahy fanahy taminny devoly izy ny hanova vato ho mofo satria noana izy. Nilaza i Kristy fa voasoratra fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloaky ny vavan'Andriamanitra. Moreso, rehefa alaim-panahy hiankohoka amin'ny devoly izy dia nilaza i Kristy fa voasoratra fa tsy haka fanahy ny Tomponao Andriamanitrao.
Previous lahatsoratraAhoana no ahalalako fa voavaly ny vavaka ataoko?
Next lahatsoratraVavaky ny fanafahana ho an'ny zanaka lahimatoa
Teboka vavaka mba hitahiana fiara vaovao
Ny vavaka dia manondro ny fitsabahan'Andriamanitra amin'ny dikan-tenin'ny Baiboly